Ozinina vata fampangatsiahana ara-barotra, mpamatsy - mpanamboatra vata fampangatsiahana ara-barotra any Sina
vata fampangatsiahana ara-barotra
Nenwell dia manolotra vahaolana OEM sy ODM foana mba hanampiana ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny sakafo sy ny varotra mividy sy mampiasa vata fampangatsiahana kilasy ara-barotra araka ny tokony ho izy. Ao amin'ny lisitry ny vokatray dia sokajianay ao anaty vata fampangatsiahana ara-barotra sy vata fampangatsiahana ara-barotra ny vokatray, saingy mety ho sarotra aminao ny hisafidy izay mety amin'izy ireo, tsy maninona izany, misy famaritana bebe kokoa eto ambany ho anao.
vata fampangatsiahana ara-barotra dia nofaritana ho vondrona mangatsiaka kokoa izay ahafahan'ny rafitra fampangatsiahana afaka mifehy ny mari-pana eo anelanelan'ny 1-10°C, ampiasaina betsaka amin'ny fampangatsiahana ny sakafo sy ny zava-pisotro mihoatra ny 0°C mba hitazonana azy ireo ho vaovao. Ny vata fampangatsiahana ara-barotra dia matetika sokajiana ao amin'ny vata fampangatsiahana aseho sy vata fampangatsiahana. Fampangatsiahana ara-barotra midika hoe vondrona mamirifiry izay ahafahan'ny rafitra fampangatsiahana afaka mifehy ny mari-pana eo ambanin'ny 0°C, matetika izy io no ampiasaina amin'ny fampangatsiahana ny sakafo mba hijanonana amin'ny toerana mangatsiaka mba hitazonana azy ireo ho vaovao. Ny vata fampangatsiahana ara-barotra dia matetika sokajiana ho Display Freezer sy Storage Freezer.
Biraon'ny vera tokana swing ara-barotra sy tavoahangy fisotroana kôkôla ao ambadiky ny vata fampangatsiahana
Fahafahana fitahirizana: 138 Liter.
Toeram-pisakafoanana mangatsiaka kokoa amin'ny varavarana tokana aoriana.
miaraka amin'ny rafitra fampangatsiahana manampy ny mpankafy.
Mba hitazonana ny zava-pisotro mangatsiaka sy aseho
Surface amin'ny avo-kilasy vita loko volafotsy.
Habe maromaro azo ampiasaina amin'ny safidy.
Stainless vy ivelany & aluminium anatiny.
Fanaraha-maso ny mari-pana dizitaly sy ny efijery fampisehoana.
Ny talantalana anatiny dia mavesatra sy azo amboarina.
Ny fanjifana angovo ambany sy ny feo ambany.
Miasa tsara amin'ny insulation mafana.
Varavarana swing vera mateza.
Miaraka amin'ny hidin-trano sy ny varavarana tontonana dia auto karazana fanakatonana.
Miaraka amin'ny tapa-kazo mivelatra ho evaporator.
Kodia ambany ho an'ny fametrahana mora.
Varavarana fitaratra roa ara-barotra Fisotroana mangatsiaka sy fampisehoana labiera ao ambadiky ny vata fampangatsiahana
Fahafahana fitahirizana: 208 Liter.
vata fampangatsiahana ao ambadiky ny vata fampangatsiahana miaraka amin'ny rafitra fanamafisam-peo.
Mba hitazonana ny zava-pisotro mangatsiaka sy ny orsa voatahiry sy aseho.
Black Stainless vy ivelany & aluminium anatiny.
Ny habe maromaro dia safidy.
Fanaraha-maso ny mari-pana nomerika.
Ny talantalana mavesatra dia azo amboarina.
Tonga lafatra amin'ny insulation mafana.
Karazana varavarana mihidy automatique.
Ny hidin-trano dia azo atao raha ilaina.
Vita amin'ny famolahana vovoka.
Ny mainty dia loko mahazatra, ny loko hafa dia azo zahana.
Toeram-pisotroana varavarana fitaratra mihodinkodina roa ara-barotra sy tavoahangy divay ao ambadiky ny vata fampangatsiahana mangatsiaka kokoa
Fandrefesana tavoahangin-tavoahangy aoriana miaraka amin'ny rafitra fampangatsiahana manampy ny mpankafy.
Habe maromaro dia azo atao.
Ny varavarana sliding dia vita amin'ny vera mateza.
Auto manidy varavarana misy hidin-trano.
Eo ambanin'ny Counter Single Swing Solid Door Cold Drinks & Bear Back Bar Storage Cooler Fridge
Varavarana tokana mivaingana lamosina vata fampangatsiahana.
Mba hitazonana ny zava-pisotro mangatsiaka voatahiry sy aseho
Tany amin'ny vovobony avo lenta.
Varavarana vy tsy misy pentina misy foam ao anatiny.
Miaraka amin'ny hidin-trano sy gaskets magnetika.
Varavarana Mafy Indroa Kely Fisotroana Mangatsiaka sy Fisotroana Fampangatsiahana Fampangatsiahana
Varavarana mivaingana roa ambadika vata vata fampangatsiahana.
Ho an'ny fitehirizana sy fampisehoana zava-pisotro mangatsiaka.
Undercounter Triple Swing na Sliding Glass Door Drinks & Beverage Back Bar Cooler Fridge
Fahafahana fitahirizana: 330 Liter.
Varavarana fitaratra telo sosona ao ambadiky ny vata fampangatsiahana.
Miaraka amin'ny rafitra fampangatsiahana manampy mpankafy.
Ho an'ny fitehirizana sy fampirantiana fanamainana zava-pisotro.
Vita amin'ny galvanized ny surface.
Varavarana swing vita amin'ny vera telo miaraka amin'ny hidin-trano.
Panel varavarana misy gesket magnetika ho fanakatonana fiara.
Eo ambanin'ny Counter Mainty 3 Varavarana vera zava-pisotro sy zava-pisotro labiera Asehoy ao ambadiky ny vata fampangatsiahana vata fampangatsiahana
Asehoy ny vata fampangatsiahana mangatsiaka ao ambanin'ny counter.
Ny varavarana tokana, roa ary triple-varavarana dia azo atao.
Tena tsara amin'ny insulation mafana.
Karazana fanakatonana fiara misy hidin-trano.
Zava-pisotro labiera matevina telo sosona sy zava-pisotro mangatsiaka ao ambadiky ny vata fampangatsiahana
Commercial Undercounter Black 3 Sliding Glass Door Coke zava-pisotro & Fisotroana mangatsiaka Back Bar Display vata fampangatsiahana
Fampidirana vata fampangatsiahana ao ambadika aoriana.
Varavarana sliding tontonana dia vita amin'ny vera tempered.
Topambony ambony latabatra mofomamy kely sy pastry fampirantiana vata fampangatsiahana Chiller
Safidy 5 ho an'ny refy samihafa.
Ho an'ny fampisehoana mofomamy ambony latabatra mofo sy mofomamy.
Miaraka amin'ny fampangatsiahana ampian'ny mpankafy.
Karazana defrost mandeha ho azy tanteraka.
Varavarana anoloana fitaratra miolikolika.
Jiro LED anatiny miaraka amin'ny switch.
tongotra/casters azo zahana.
Controller nomerika sy efijery fampisehoana.
Varavarana sliding aoriana azo soloina mba hanadiovana mora.
Gasket varavarana azo soloina.
Ny talantalana fitaratra dia hazavaina tsirairay.
Ny ivelany sy anatiny vita amin'ny vy tsy misy pentina.
Fivarotana mofomamy fivarotana mofo sy mofomamy mamirifiry amin'ny vata fampangatsiahana
Ho an'ny fivarotana mofomamy mofomamy sy mofomamy mofomamy.
Rindrina sy varavarana vita amin'ny fitaratra.
Cake Counter Top Showcase Commercial Cake And Pastry Fridges Chiller Ho an'ny Bakery
Laharana maodely: NW-CV90/120/150/180/210.
Safidy 4 ho an'ny refy samihafa.
Ho an'ny fampirantiana sakafo ho an'ny fanaovana mofo countertop mofomamy sy tsindrin-tsakafo.
Ny atitany vita amin'ny vy tsy misy pentina.
Ny ivelany vita amin'ny vy sy marbra.
123456 Manaraka > >> Pejy 1 / 13